ITAOSY AMBANIALA : Mirongatra tsy misy toy izany ny vaky trano sy halabotry
Efa ho herinandro maromaro izay no velon-taraina mahakasika ny vaky trano sy ny halabotry madinidika ireo mponina mipetraka eny Ambaniala Itaosy ary betsaka ny olona lasibatra tamin’izany tato ho ato. 9 novembre 2017
Raha tsiahivina anefa dia efa somary nangingina ny tranga fanafihana teo aloha teo. Araka ny tatitra voaray avy tamin’ireo fokonolona eny an-toerana, omaly maraina dia tokantrano miisa roa izao no fantatra teny amin’ny manodidina fa nisy namaky ny faran’ny herinandro lasa teo iny. Tapitra lasan’ireo jiolahy avokoa ny entana tao an-trano raha ny fanazavana voaray hatrany ary nilaza ihany koa ireto farany fa tsy teo an-tanàna ny tompon-trano, hany ka nanararaotra nitaona izay zavatra mety ho zakany ireo olon-dratsy.
Hatairana ny an’ny tompon-trano ny fiandohan’ny herinandro lasa teo raha toa ka trano foana tsy nisy na inona na inona no nivantanana. Manoloana ny zava-nisy dia efa nanomboka mahana ireto voaroba fa nisy olona teo an-tanàna niaraka nitsikombakomba tamin’ny olon-dratsy, ka nametraka ny raharaha teo anivon’ny mpitandro filaminana izy ireo mba hanao ny famotorana. Etsy andaniny anefa dia nanambara ny heviny ireo mponina sasantsasany fa misy olona ahiahiana tokoa eo amin’ny manodidina ary mangataka ny mpitandro filaminana haingana izy ireo hatreto mba hisian’ny fiaraha-miasa.
Marihana fa tsy io tranga tamin’ny faran’ny herinandro io ihany no nisy tao an-tanàna fa manjaka hatramin’ny halabotry matetika ka mihalany tamingana ny biby fiompy sy ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Miandry ny fandraisan’andraikitra ny zandary izy ireo amin’izao fotoana izao. Betsaka ireo maniry ny amin’ny hanaovana fisafoana ny tanàna amin’ny alina satria isak’alina no tena anaovan’ireo mpangalatra ny fandrobana.